Kunezimo ezikhethekile ezikuvumela ukuba upheke amaqanda ngisho ngaphandle kwegobolondo. Lokhu kungenziwa kanjani? Kuphi ukuthenga iziqukathi ezinjalo? Konke lokhu kungatholakala ngokwengeziwe.
Wonke umuntu angakwazi ukupheka amaqanda. Ukwenza lokhu, kuyadingeka ikhono elikhulu. Kodwa ngezinye izikhathi ufuna ukuphuma endleleni ejwayelekile yokupheka. Lokhu kuzosiza ukwenza amafomu alula ukupheka. Ngakho-ke, ungawapheka kanjani amaqanda ngendlela yokuqala futhi ungachithi isikhathi esiningi?
Ekuphekeni, kuhlale indawo yokucabanga. Ungakwazi, isibonelo, ukuthenga amafomu okupheka amaqanda ngaphandle kwegobolondo, okuzokuvumela ukuba usuke emazingeni ajwayelekile. Ngakho-ke ungakwazi ukusetha lo mkhiqizo ngaphandle kwesikhathi. Ngenxa yalokho, iqanda lizolungiswa kahle, futhi akudingeki ukuba ulihlanze kugobolondo. Amafomu aphephile futhi angabizi kakhulu okupheka amaqanda ngaphandle kwama-shells azojabulisa bonke abanikazi bawo. Ayikho udoti wangaphandle. Esikhathini esipheleleko asikho nje ifomu lokupheka amaqanda ngaphandle kwegobolondo, i-spoon nayo inikezwa. Ihloselwe ukuhlukaniswa kwezikhupha ezivela kuma-protein. Lokhu kukuvumela ukupheka izingxenye zamaqanda ngokwehlukana. Amaqanda okupheka anesimiso esifanayo ayohlale ejabulisayo futhi engakhululekile. Wonke umuntu uzokwazi ukubhekana nale ndaba. Kuyoba mnandi ukusebenzisa le mikhiqizo engavamile futhi ujabulele konke ukunethezeka kwabo.
Isitsha sokupheka amaqanda ngaphandle kwama-eggshell silula. Kuneziqukathi eziningana lapho kuthunyelwa amaqanda (isikhunta esikhethekile), bese kuncishiselwa emanzini abilayo futhi kuphekwe. Kulula kakhulu ukupheka iqanda ngaphandle kwanoma yimuphi udoti. Lezi ziqukathi zilula kakhulu ukusebenzisa. Umama ngamunye unesimo sokupheka amaqanda, angasetshenziswa nsuku zonke. Wonke umuntu unethuba lokusebenzisa iziqukathi ezinjalo, futhi kukhona amanye amathiphu awusizo wokupheka. Ungakwazi ukupheka ngamafomu hhayi nje amaqanda avamile. Kuzo, uma befisa, izithako ezihlukahlukene ziyanezelwa. Ukuze wenze ukunambitheka okukhulu, ungasebenzisa anyanisi, amakhambi ahlukahlukene aqoshiwe, isoseji, yilokho konke okushiwo i-fantasy. Ukunambitheka kwamaqanda akuvamile, kuhle ukukhonza etafuleni. Abesifazane abaningi besifazane benza amaqanda agcwele iziqukathi ezinjalo . Kunezinketho eziningi zokwenza lo mkhiqizo. Ukuze uqale, kufanele ulandele isikhunta samaqanda ngaphandle kwama-eggshell bese uqala ukwenza imibono yakho yokucubungula empilweni.
Izitsha ezinjalo ezingavamile zingathengwa njengesipho kumfazi noma intombazane. Amafomu azoba usizo kunoma yiliphi ikhishi. Isethi ibandakanya isikhunta sezingu-6 kanye nesipuni esisodwa. Ukusebenza nabo kutholakala ngaphandle kwamakhono, ngakho-ke angasetshenziswa ngisho namadoda.
Okokugcina, udinga ukuthi ungathenga amafomu amaqanda ngaphandle kwama-eggshell ngaphandle kwezinkinga. Izindleko ezitholakalayo. Imikhiqizo yenziwe ngezinto ezibonakalayo eziphephile ngokuphelele empilweni, zimelele ngokuphelele ukushisa okuphezulu. Ngamafomu kuyoba lula ukupheka amaqanda, kuzokwenza kube mnandi futhi kubonakale kunembile. Bangakhonza etafuleni izivakashi noma bajabulise abathandekayo babo.
I-sodium cyclamate iyingozi? Ukudla okungeziwe ku-E-952
"Baskets" - ikhekhe nge ukhilimu: iresiphi
Ukwehlukanisa - ukwahlukana nokuhlukaniswa lonke ku ezihlukile
"Bechamel" sauce. iresiphi